प्याकेजिङ मेटेरियलमा दिएको सुविधामा विवाद:: Naya Nepal
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओमा दोश्रो दिनमै ५.३४ गुणा बढी आवेदन
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स नेपालको आईपीओमा सोमवार साँझसम्ममा ५ दशमलव ३४ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
५ लाख १७ हजार ६१३ जनाले १ करोड ४७ लाख १५ हजार ८७० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् ।विक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलका अनुसार रू.१ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख ७६ हजार बराबरको आवेदन परेको हो ।
दोस्रो दिनमा मात्रै ४ लाख जनाभन्दा बढीले कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिएका छन् । पहिलो दिनभने १ लाख जना आवेदकले कम्पनीको आईपीओ भरेका थिए ।
सर्वसाधारणको लागि विक्री खुला गरिएको कुल २७ लाख ३० हजार कित्तालाई आधार मान्दा ५ दशमलव ३९ गुणा बढी आवेदन हो ।
उक्त कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेकोले आगामी असोज १४ गतेसम्म मात्रै आवेदन दिन सकिनेछ ।
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले ३० लाख कित्ता आईपीओ आइतवारदेखि विक्री खुला गरेको छ ।
कम्पनीले ३० लाख कित्तामध्ये १ लाख २० हजार कित्ता कर्मचारीको लागि, १ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषको लागि र बाँकी रहेको २७ लाख ३० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो ।
आईपीओ निष्कासन बन्द मिति छिटोमा असोज १४ र ढिलोमा असोज २५ गतेसम्म रहने छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेकोछ । साथै आवेदकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएका सि–आस्वा सेवामा सहभागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले ग्रेड ४ रेटिङ प्रदान गरेको छ । ग्रेड ४ रेटिङले कम्पनीको आधारभुत पक्ष औषत भन्दा तल रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०१ दशमलव ७६ रहेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७० करोड रहेको छ । आईपीओ निष्कासन बाँडफाँट पश्चात पूँजी रू. १ अर्ब पुग्नेछ ।
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीले भदौ २४ गते अनुमति पाएको थियो । हालसम्ममा कम्पनीले ३९ ओटा शाखा कार्यालयहरुबाट बीमा सेवा दिंदै आएको छ ।
गत आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ५ करोड ६ लाख नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा नाफा ३९ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड ६२ लाख नाफा कमाएको थियो ।
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालले ३० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हालै अनुमति पाएको छ ।